I-Chipolo ONE Spot, iyahambelana neBusca kwaye inexabiso eliphantsi kune-AirTag | IPhone iindaba
Njengoko besitshilo ngamanye amaxesha, iApple ibandakanye icandelo "lezinto" kwisicelo sokuKhangela, ke ibingumbandela wexesha ngaphambi kokuba imveliso ehambelana ngakumbi nangakumbi. Nangona kunjalo, emva kokumiliselwa kwe I-AirTag kuye kwafuneka silinde ukufika kweendaba.
Ngoku iChipolo isungula indawo eNYE, enye eya kwi-AirTag yexabiso eliphantsi kwaye iyahambelana ngokupheleleyo nesicelo sophando luka-Apple. Ukuvulwa kwesicelo sokuKhangela kuya kuzisa uluhlu olunomdla lweemveliso ezinokwenza ubomi bethu bube lula ngaphandle kokuchitha ii-euro ezingama-70 ezixabisa i-AirTag kunye neeringi zayo eziphambili.
Oku kwabhengezwa luphawu uqobo:
I-Chipolo ONE Spot yenye yeemveliso zomntu wesithathu ezihambelana ngokupheleleyo nesicelo se-Apple's Search. Ungayongeza ngokulula kwaye ngokukhawuleza kwisicelo ngokwaso kwaye usifumane nge-iPhone yakho, i-iPad, i-iPod okanye iMac.
Yahluke mpela kwi-AirTag ngokwendlela yoyilo, le Chipolo ENYE INDAWO Inomngxunya omncinci oya kusinceda ukuba siyifake kwizitshixo ngaphandle kokuchitha ii-euro ezingama-39 ezixabisa iringi ephambili yenkampani yeCupertino. Esi sixhobo sine Ukuxhathisa kwe-IPX5 ke ngokomgaqo ayizukuchasana nokuntywiliselwa emanzini nangona inganyangeki uthuli kunye nokutshiza, kwinxalenye yayo i-AirTag inokuntywila ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30.
Ngokufanayo, i-ONE Spot inesithethi esingama-120 dB kwaye inebhetri yohlobo lwebhetri enokubuyiselwa njenge-AirTag. Isixhobo siya kubiza malunga ne- $ 28 ngelixa iipakethi ezine zibiza i-90 yeedola. Ngokunyaniseka, kuthathelwa ingqalelo ukuba le Chipolo ENYE ibala ayifuni iringi engundoqo kuba sele igqityiwe, ulondolozo luphezulu kakhulu kune-AirTag eya kufuna isincedisi ewe okanye ewe. Nangona kunjalo, Ukuthatha ingqalelo ukuba kwi-AliExpress kukho ii-keyrings ze-AirTag ze-euro ezimbini, andisiboni isizathu sokubheja kwi-Chipolo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Chipolo ONE Spot, iyahambelana neBusca kwaye inexabiso eliphantsi kune-AirTag
IPodcast 12x30: Iapile, iiconsole kunye nemidlalo yevidiyo